Dawladda PuntLand oo gacantaa ku dhigtay sahay loo waday kooxda ka dagaalanta Galgala. – Radio Daljir
Diseembar 16, 2012 6:07 b 0
Boosaaso, Dec, 16- ?Ciidanka ammaanka ee dawladda Puntland ayaa ku guulaystay gacan dhigista sahay loo wadey xooggaga Al-shabaab ee ka dagaalama buuraha Galgala ee gobolka Bari, sidoo kale waxaa la qabqabtay dad ku hawlanaa qorshahaasi.
Dawladda ayaa maanta oo axad ah Warsaxaafadeed ka soo saartay sahaydaasi la qabtay, dawladdu sidoo kale waxay sheegtay in la hayo gaarigii wadey sahaydaasi ka gadaal kolkii ciidanku ay heleen xogtaa ku saabsan in sahay loo wado kooxaha hoos taga kooxda Al-shabaab oo horay ula midowday Urur weynaha Al-qaacida.
Qoraalka lagu shaaciyay sahaydaasi la qabtay ayaa dhanka kale waxaa la raaciyey in gacanta lagu dhigey darawalkii gaariga iyo kuwo horey loogu tuhunsanaa fududaynta sahay siinta Al-shabaab ,hadana baaritaano ay ku socdaan dadkaasi la qabtey dhawaana la horkeeni doono laamaha Garsoorka.
Puntland ayaa dagaal adag kula jirta kooxda Galgala oo uu horay u hogaamin jiray Maxaamed Siciid (Atom) balse hada lagu badalay hogaamiye kale, dhawr jeer ayayna Puntland iyo kooxdaasi ku dagaalameen buuraha Cal-madaw.
Marxuum Cali Faarax maamulihii shirkadda Amal qaybteeda Gaalkacyo oo maanta lagu aasay Gaalkacyo